Tenga Altrenogest powder (850-52-2) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Madzimai eHormoni / Altrenogest upfu
Rating: SKU: 850-52-2. Category: Madzimai eHormoni
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva ku gram kusvika kukura kwe Altreogest powder (850-52-2), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Altrenogest powder inowanzotarisirwa kumashizha emadhora mumakambani akaenzana sechinhu chisina kushandiswa kushandiswa kubvisa kubata zvepabonde / utsinye. Muchidzidzo ichi, 2-yr-Old Quarter Horse stallions mukutanga-maitiro ekudzidzira yakashandiswa altrenogest (0.044 mg / kg BW zuva rega rega) kuti aone migumisiro yehupombwe / hutsinye hunhu, testicular parameters, uye steroid hormone profiles.
Molecular Kurema: 310.43
Melt Point: 116 kusvika 120 ° C
ZVACHOKWADI (S): pfupa re Altrenogest
GENERIC ZITA (S): Dzorera, Matrix, Dzorera poda, Matrixpowder
Altrenogest Kudha Kushandiswa
Altrenogest powder, progestagen, inonzi 17α-allyl yakagadzirwa nemhando yakasimba yevanabolic agent trenbolone iyo yakarongeka yakafanana neyomurume weshure hormone, testosterone. Altrenogest powder inonzi inoshandiswa zvakanyanya, uye kwenguva refu, mukadzi makwikwi mabhiza. Izvi zvinoitika mukuedza kusimbisa hutano hwekubereka, nokudaro zvichiita kuti dzive dzakawanda uye dzinokodzera kudzidziswa nekukwikwidzana. Zvisinei, kutarisira kwenguva yakareba hakusi maererano nevanokurudzira mazano. Munyika dzakawanda, mishonga yakanyoreswa chete pamuromo wekutonga maora kwemazuva 10 kuitira chinangwa chokugadzirisa oestrus ovulatory muchikamu chekutsvaga kwekutsvaga kwemaoestry cycle. Altrenogest poda yakashata inoderedza maitiro oestrus mares mukati me 2-3 mazuva ekutanga kwekutonga. Migumisiro yenguva yakareba yehutungamiri mares e Altrenogest powder hainyanyi kuzivikanwa, zvikurukuru achitaura kune avo vanoshandiswa mukukwikwidza. Uyezve, hazvisi pachena kana mushonga wacho une chero anabolic kana kuti hutsika hunobudirira mumabhiza.
Saka chidzidzo chakanga chagadzirirwa kupa sarudzo yekutanga yekuwedzerwa kwenguva yakareba yeAlrenogest poda yakasvibira kune sedentary mares maererano nehutungamiri hwehutungamiri hwevanhu, muviri-mashoma uye mamiriro ezvinhu emuviri (BCS). Maira gumi namaviri emarudzi akasiyana-siyana (Zvakanaka uye Standardbred) akawanikwa kubva kune mutengesi wemabhiza. Mhuka dzakachengetwa panzvimbo yekudyisa seboka rimwechete kwevhiki ye20. Kutevera kutsvaga, maora ose aiwanzochengetwa hutano hwepamusoro, kusanganisira de-worming, dental prophylaxis, hoof care uye vaccination. Mares aibvumirwa kuti aite zvishoma nezvitsva kwemavhiki mana panguva iyo yakagadzika seboka revanhu, uye akazogara achiita maitiro ekufambisa, semuenzaniso, kubatwa, kuyerwa, kuiswa mukudengenyeka, kutungamirirwa kwemishonga yemuromo nemishonga. Kwenguva yose yekudzidza yekuwedzera yakawanda lucerne hay yakadyiwa. Mares akanga akayerwa uye chikwata chemamiriro ezvinhu chakanyorwa kaviri vhiki nevhiki.
Ndeipi iyo miyo ye Altrenogest powder
Kuraira kwemuromo weAlrenogest powder nokuda kwekudzvinyirira maoestrus mumakwikwi emabhiza inofungidzirwa kuti yakapararira mune dzimwe dzidzo dzekukwikwidza, uye inogona kuendeswa mberi kwemwedzi inoverengeka munguva yemakwikwi. Kuongorora kana Altrenogest poda yakasviba ine chero anabolic kana zvimwe zvingaita kushandiswa kunosimudzira zvinhu zvinogona kupa bhiza zvisina kunaka, takaongorora mhinduro yemuromo weAlrenogest powder (0.044 mg / kg), inopiwa zuva rimwe nerimwe kwemavhiki masere, pamagariro evanhu hutarchy, basa rebhadhiro, muviri-mashoma uye mumuviri mamiriro ezvinhu e12 sedentary mares. Zvakagumiswa kuti nguva yakareba inotungamirirwa neAlrenogest poda yakasvibiswa pamusana wekurudzirwa mazai kusvika kune imwe nzvimbo yemadhora yakanga isingabatsiri pakuita zvekuita masimba, chimiro chemuviri kana chikwata chemuviri.
Mafuta eArgrenogest anoshandisa sei
Mune ruzivo rwedu, Altrenogest powder haisi nguva dzose yakakwanisa kuisa chirevo chekugadzirisa pamusoro pechipupuriro chetestro ye mare. Nokudaro, takaongorora mazana e12 ayo aibatwa neAlrenogest poda yakasvibiswa kuti aone zvikonzero zvekukundikana kwekugadzirisa chirongwa chesterrous. Maora aya aidyiswa Altrenogest powder kweZ15 kune mazuva 20 uye akaongororwa nokuda kwekusimudzira follicle, ovulation, uye corpus luteum kupora panguva yekurapa. Nokushandiswa kwechokwadi-nguva ultrasonography uye radioimmunoassay yeprogesterone, takagumisa kuti Altrenogest poda yakasakwanisa kudzvinyirira kukura kwe follicles kusvika kuhutano hwehutachiona mune mamwe mares, zvichiita kuti kuve nehuputi panguva yekurapa kana kuti zvisati zvatarisira mushure mokupera kwekurapa. Mukuwedzera, pfupa reAllrenogest harina kuonekwa kuti rakapfupisa mararamiro eupenyu hwekorpora lutea yakaumbwa panguva yekurapa; mu 4 mares, izvi zvakaguma nekuramba kwe corpora lutea mushure mekuguma kwemazuva ekurongeka kwezuva re15. Zvakawanikwa zvekupedzisira zvakatitungamirira kuti tiratidze kuti kana chikwata che luteolytic che prostaglandin chakanga chapiwa pamugumo wekurapa kweArrenogest yakasvibirira, zvaizove zvakagadziridzwa kutarisa pamusoro pekushanduka kwemhepo. Migumisiro yekudzidza kwedu yakasimbisa maitiro edu ekiriniki kuti Altrenogest powder ingagutsa kugadzirisa iyo equine estrous cycle mumamwe mamiriro ezvinhu, asi haifaniri kushandiswa apo kunyatsogadzirisa pamusoro pekuvhara muviri kunodiwa.
Batsiro reAlrenogest powder
Altrenogest powder (ALT), progestogen yakagadzirwa, uye gonadotropin yakajeka yakashandiswa kune Swine Leukocyte Antigen (SLA) isina mukoko muduku yenguruve iyo inowanzove yakaderedzwa mazinga ovulation uye chiyero chiduku chetita. MuChinyorwa 1, 15 vakadzi vakuru venguruve dzaive dzekutonga (Group I, n = 5), dzakadyiswa 15 mg ALT / zuva kwemazuva 14 (Group II, n = 5), kana kuti yakadyidzwa ALT uye yakarapwa neine mare ane chirwere gonadotropin (1200) IU, im) uye chorionic gonadotropin (500 IU, im) 24 h uye 104 h, zvichienderana, shure kwekubvisa ALT (Group III, n = 5). Muchidzidzo 2, mapoka eenguruve (I, n = 24; II, n = 11; III, n = 11) akabatwa zvakafanana kune avo muChidzidzo 1 kunze kwekuti nguruve muChidzidzo 2 (Groups II ne3) dzakasungirirwa. Mazai ezvipfuwo zvose zvidzidzo zviviri akaongororwa maharaparascopically kana nelaparotomy 5-8 mazuva mushure meesrus kuti aongorore basa revarivha. IUteri yeboka rechipiri neyechitatu mhuka muChidzidzo 2 yakasvibiswa nehutsika hwemaitiro, iyo yakaongororwa nokuda kwehupo uye hutano hwemhesi.
Hapana nguruve yakaratidza hunhu panguva yekutonga kweALT Haasi mhuka dzese dzakaratidza hunhu hwehunhu mushure mekubviswa kweALT. Pakabatanidzwa data kubva kuzvidzidzo zviviri izvi, 2 ye16 (12.5%) yeboka II uye 6 ye16 (37.5%) yeboka reGuru III nguruve dzakatadza kuratidza kumira estrus. Kutevera ALT ne-drawal, vakadzi mumapoka II uye III vakadzokera kuestrus mu5.6 ± 0.3 uye 5.8 ± 0.3 mazuva, zvichiteerana (p> 0.05). Corpora lutea nhamba yakawedzerwa (p <0.05) ne ALT kurapwa chete (11.4 ± 1.8) zvichienzaniswa neanodzora (6.9 ± 1.3) uye yakawedzerwa (p <0.01) nekuenderera mberi nekushandiswa kweakanyanya gonadotropin (22.6 ± 1.9). Zvakajairika-zvinoonekwa morula uye blastocysts zvakawanikwa kubva ku14 ye22 vakadzi. Nekudaro, ma cysts akawanikwa mu endometrium ye5 ye9 uye 9 ye10 nguruve mumapoka II uye III, zvichiteerana. Ukuru hweichi chiitiko, chakarongedzwa histologically se cystic endometrial hyperplasia (CEH), dzakasiyana pakati pevakadzi, uye kuitika kwayo kwakaratidzika sekuenderana nezera. Kwakazotevera kuongorora kweiyo isina kurapwa SLA diki yenguruve vafudzi-vakaratidza kuti CEH yakanga isina hukama neALT orgonadotropin kurapwa.
Ichi chidzidzo chinoratidza kuti chirwere cheAlt chete chinoshanda mukugadzirisa chesiteri uye chinobatsira kune maitiro ekuraira muSLA mini yenguruve. Kushandiswa kwekuwedzera kwegonadotropin kunokurudzira kupfurikidza kwekupindurwa kwemaawa; zvisinei, kukanganisa uye kuwedzera kwehuwandu hwehutsika hunoita zvishoma. Kudzoka kwemaitiro anowanzoitwa morphologically anoratidza kuti kumera hakubatsiri. Zvisinei, zvidhinha zviduku zvemashoko panguva inogona kuenzaniswa nejastic degeneration ye uterine endometrium, iyo inogona kukonzera kuwedzera kwekufa kwe embryonic uye / kana kuti kuderedzwa kwekusimudzirwa kwekuiswa.
Altrenogest mbichi yakashambadzira Kudzingisa
Altrenogest powder summary
Ichi chidzidzo chakaongorora kudzvinyirira mhedzisiro pabonde uye hutsinye maitiro uye seminal parameter mune madiki madhiraini semhedzisiro yekutungamira kwezuva nezuva kweAltrenogest powdera kwemavhiki masere. Aya ma parameter akaongororwawo mushure menguva yekudzoreredza kwemavhiki masere (zuva 111). Katatu muchidzidzo (mazuva-9, 60 uye 111), zviyero zvakanyorwa zvichisanganisira uremu, chiyero chakakomberedza uye mamiriro emuviri mamiriro emastallion. MaStallion mumapoka maviri ekurapa haana kusiyana muhuremu, mamirire emuviri mamaki kana metacarpal zviyero mukati mekudzidza. Nekudaro, zviyero zvemakwenzi zvakaderera (P <.05) mumakwenzi akarapwa pavhiki masere uye akaramba akaderera (P <.05) mushure memavhiki masere mushure mekumiswa kweAltrenogest poda yakasviba (vhiki 16). Maitiro eiyo scrotal sedenderedzwa aive akasiyana (P <.05) pakati pekutonga nemapoka ekurapa pavhiki 16. Kuderera mukufungidzirwa kwemazuva ese kugadzirwa kwehurume (DSP) kwakawanikwawo mumatare mukati meboka rekurapa mumavhiki masere ese (P <.01) uye Mavhiki gumi nematanhatu (P <.16). Uku kuderera kwekufungidzirwa kweDSP kwaigona kunge kwakabatana pamwe nekuderera kwechikamu chakatenderera. Spermatozoal kusanzwisisika kwakawedzera zvakanyanya mukati memakoko ekurapa, aine zvisizvo zvemusoro (P <.05) uye muswe kusanzwisisika (P <.009) kuwedzera pakati peiyo pre-kutongwa kuunganidzwa kwenguva uye yevhiki sere yekuunganidza nguva.
Madhimoni akakwenenzverwa pabonde uye hunhu hunhu vachishandisa yakatsanangurwa yekutsvinya bvunzo katatu panguva yekudzidza (mazuva-12, 57 uye 111). Maitiro akaongororwa nekufumura stallion kune mare inobatwa ruoko muestrus kwemaminetsi matatu ekucherechedza. Flehmen frequency uye nguva yakaderera (P <.05) pakati peAltrenogest poda-yakarapwa stallions panguva yevhiki sere yekuunganidza. Iyo nguva yekudonha kwepenisi yakada kudzikira (P <.08) pavhiki sere mumastallion akarapwa. Nguva yekumisikidza (P <.05) uye frequency (P <.005) yakadzikiswawo muboka rakarapwa mumavhiki masere.
Iyi data inoratidza kuti kurapwa kwemashizha ediki neAlrenogest poda yakasviba kwevhiki masere yakagadzirisa migumisiro yepabonde uye hutsinye hwekuita uye huwandu hwemhizha. Zvakawanda zvezvipiramu izvi hazvina kudzokera kuhutano hwekutanga kusati kwapera masvondo masere mushure mokupera kwehutano. Kuwedzera kutsvakurudza kunodiwa kuti uongorore kukwanisa kwemazana emashiriyoni ekudzoka kwenguva yakareba kubva pamigumisiro yakaipa yeAlrenogest powder administration sezvakaratidzwa nekuderedzwa libido, zvipimo zvinokonzera uye kurwisa kwemazuva ese zvakanyorwa mubhuku rino.
Nzira yekutenga Altrenogest powder kubva kuAASraw